I-Star Trek: UkuFumanisa kuFanelekile ngakumbi kwiPost-Trump - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'I-Star Trek: UkuFumanisa' iNgakumbi eyiPost-Trump
Star Trek: Ukufumanisa I-CBS yoFikelelo lonke; umzekeliso woMbonisi
Ukuzama ukuzama, isiqendu sesihlanu se Star Trek: Ukufumanisa Ixesha lesithathu, liqala ngokuncuma kwabasebenzi.
Emva kokuhamba ixesha ukusukela kwinkulungwane yama-24 ukuya kwinkulungwane yama-32 ekupheleni kwexesha lesibini, iU.S.S. Abasebenzi bokufumanisa bachitha iziqendu ezine bephinda behlangana kwaye bekhangela ikomkhulu le-United Federation yeePlanethi kunye nesebe lokuhlola emkhosini, i-Starfleet. Kwisiqendu sesihlanu, ekugqibeleni bafikelela apho baya khona kwaye bamangaliswa ziinqanawa zikanokutsho ezimiswe apho. Ukubamba isimangaliso sabalinganiswa kunye noncedo, umlawuli weqendu uMaja Vrvilo usebenzisa enye yolu ngcelele 'utyikityo olubonakalayo olubonakalayo: imontage yeempendulo zokudubula ezivela kubasebenzi bebhulorho.
Kuba Star Trek: Ukufumanisa Abagxeki, iibhulorho zokuphendula izithambisi ezibandakanya iingxaki zomboniso. Phi Ukuhamba izinzile njenge-franchise enezinto ezixhalabisayo, Ukufumanisa luvulekile elubala, luhlala lubonisa abalinganiswa balo belila, begona bencumile. Kodwa kuthotho 'lwesithathu ixesha, iimvakalelo zisebenza Ukufumanisa ukwenza ntoni Ukuhamba bekusoloko kusenziwa njalo: ukubeka izimvo kwinyani yezopolitiko.
Kwixesha elizayo (nangaphezulu), abasebenzi beDiscovery bafumanisa ukuba iinkolelo zabo ziphelelwe lixesha njengobuchwephesha babo. Intshabalalo eyimfihlakalo yenze ukuba uhambo lwe-warp lube yinto engenakwenzeka, kwaye uninzi lweeplanethi ziye zajika zodwa kwaye zinobutshaba. Ngomhlaba kunye namanye amazwe aphambili arhoxayo, i-United Federation yeePlanethi incitshisiwe yangumdibaniselwano obuthathaka, isithuba sayo samandla esigcwaliswe liqela lolwaphulo-mthetho elibizwa ngokuba yiEmerald Chain. Uninzi lwabantu luzijonga nje, lubalahla abo baxhasa imigaqo ye-Federation njengamakholwa okwenyani, abanomdla wokungahambelani nehlabathi lokwenyani.
AmaMelika abukele Ukufumanisa 'Ixesha lesithathu njengoko lakhutshwa ngeenyanga zokugqibela zolawulo lukaTrump, kunzima ukuphosa ukuthelekiswa phakathi kweFederal Federation kunye nolawulo lwethu lwentando yesininzi. Ukufika kweveki nganye kukaMlawuli uMichael Burnham (uSonequa Martin-Green) kunye nabalingane bakhe babonelele kancinci malunga neendaba nangolunye uluvo, oluthembise ukuba singoyisa imikhosi esongela iinjongo zethu. Star Trek: Ukufumanisa Umbono ubaluleke ngakumbi ngoku xa sele kuqale ulawulo olutsha kwaye, kunye nalo, umsebenzi ekufuneka wenziwe ngabantu baseMelika ukubuyisela inkululeko yethu. Star Trek: Ukufumanisa I-CBS yoFikelelo lonke
I-lily james ikratshi kunye nocalucalulo
Kulungile ukuze ungalungi
Ngelixa Ukufumanisa , njengabo bonke Ukuhamba ibonisa, inika umbono ongenamntu ngekamva, ayikhe iyityeshele intlungu yabalinganiswa bayo. Ixesha lesithathu lichitha ixesha elaneleyo lescreen kubasebenzi abajongene nengozi yabo, ngokucacileyo kwibali lomqhubi wenqwelomoya uKeyla Detmer (uEmily Coutts). Nangona wawa ngempumelelo Ukufumanisa xa yafika ngexesha, uxinzelelo lomzuzu, kudityaniswa nokwenzakala okunamandla okugcinwe ngabo wayesebenza nabo, yashiya iDemmer yonakele ngokwasengqondweni.
Kwisiqendu sesine, uKaputeni Saru (uDoug Jones) uzama ukunciphisa uxinzelelo ngokujula igosa kwisidlo sokubopha. Konke kuhamba kakuhle de uDemmer aphule, ekhumbula imifanekiso yakhe yeStamets (Anthony Rapp) kunye nokulimala kwakhe kwegazi. Ukusika phakathi kwe-close-ups esondeleyo kwi-Detmer njengoko ekhupha inkcazo phakathi kokuhleka okungafanelekanga kunye nokubetha ngokubanzi kwabasebenzi abothusayo nabanyanyisayo, umlawuli wecandelo uHanelle M. Culpepper kunye nabalobi u-Alan McElroy, uChris Silvestri no-Anthony Maranville babamba uxinzelelo phakathi komnqweno kaSaru ukuqhubela phambili kunye nokugula kwengqondo kukaDmer.
Isiqendu se-A-plot sichaza umxholo ngokulandela umsebenzi kaBurnham kunye nomlingisi omtsha u-Adira Tal (Blu del Barrio), ingqiqo yolutsha kunye ne-alien signiont emzimbeni wabo. (I-Adira ayizizo ezambini, njengo-Del Barrio; bobabini basebenzise bona / bona izimelabizo I-symbiont ithwala iinkumbulo zayo yonke imikhosi yayo yangaphambili, kubandakanya i-Starfleet Admiral Tal, kodwa u-Adira akakwazi ukufikelela kuzo kuba bayala ukukhumbula ixesha labo lokugqibela nomphathi we-symbiont, isoka labo uGrey Tal (u-Ian Alexander). Ukufumana inkumbulo ye-Admiral Tal, u-Adira kufuneka ajongane kwaye asebenze ngeentlungu zokuphulukana nezithandwa zabo.
Zombini iziza zibonisa ukubaluleka kokuvuma ukwenzakala njengenxalenye yokuqhubela phambili. Thina bantu baseMelika kufuneka siyigcine engqondweni le minyaka izayo. Ayisiyiyo eyokuphathwa kakubi kukaTrump kurhulumente kuphela ebangele ukonzakala okukhulu okuvela kwi-COVID-19, kodwa imigaqo-nkqubo esebenzayo yokulwa nokufudukela kwelinye ilizwe, imigaqo-nkqubo ye-anti-LGBTQ + kunye nobundlobongela obuvela kumaqela enzondo akhuthazwe ngumongameli wangaphambili abonakalisile ubomi. Amanyathelo okuqala olawulo lwe-Biden anokulungisa eminye yale migaqo-nkqubo, kodwa umonakalo sele wenziwe, kwaye sidinga ixesha lokujongana naloo ntlungu. Star Trek: Ukufumanisa I-CBS yoFikelelo lonke
Ukwahluka okungapheliyo kwiiNdibaniselwano ezingapheliyo
Ukulungisa ngokufanelekileyo umonakalo obangelwe bubongameli bukaTrump, kufuneka sijongane nobukhulu bamhlophe kwilizwe lethu. Ukusuka kubawisi-mthetho behlutha amalungelo abo bavoti ukuba bathiye amaqela ahlasela abanye ukuya uqhushululu lwakutsha nje lwe-US Capitol , abantu kwilizwe liphela baye balwa ukugxila kumandla phakathi kwabamhlophe baseMelika. Uninzi lwaloo mpembelelo luqhutywa yintiyo elula kunye nokunqwenela amandla. Kodwa ivela kuluntu olunobuhlanga, olunemvelaphi efanayo Inkwenkwezi yetrek ihlala ichasa ngaphakathi kwemida yayo yesayensi.
Naxa yayingumboniso malunga namadoda amathathu amhlophe, Inkwenkwezi yetrek uxelele amaxabiso iyantlukwano engapheliyo kwindibaniselwano engapheliyo . Akukho luthotho luneziqubulo ezingcono kune Ukufumanisa . Ukongeza ekuboniseni inkokheli yabasetyhini abaMnyama (nangona ingabi nguKapteni kude kube sekupheleni kwesithathu), Ukufumanisa ineqela lesamente elinobuhlanga elininzi kunye nabaninzi, kunye neendidi zomzimba phakathi kwabalinganiswa bayo abaphambili.
Oko kuzinikela kuyantlukwano kuqhuba elinye lawona manqaku anelisayo onyaka, kubandakanya ubuhlobo beStamets kunye noAdira. Nangona isazinzulu esine-cranky ekuqaleni sikucaphukisa ukungabi nantlonelo kulutsha, ukhawuleza avelane nengxaki yabo, kwaye ekugqibeleni uStamets kunye neqabane lakhe bamkele uAdira.
I-duo iqinisa ubudlelwane bayo kwindawo entle ukusuka kwisiqendu sesibhozo, emva kokuba uAdira evumile ukudideka kwizikhumbuzo ezininzi ngaphakathi kwentloko yabo. Emva kokuphulaphula ngokuzolileyo, uStamets uthinta ipiyano kwaye umema u-Adira ukuba asebenzise ulwazi lwabo lomculo abasandula ukulufumana ukuba bamkhaphe kwi-cello. Embindini wesiqendu malunga ne-mobsters yendawo kunye nezilwanyana, umlawuli (kunye nexesha elide Ukuhamba Eyona nto iphambili) UJonathan Frakes uthatha ixesha ukuvumela iiStamets kunye noAdiria benze umculo kunye.
Lo mbono usikhumbuza ukuba kutheni abamhlophe be-supremacists kunye nabasemagunyeni bezama ukutshabalalisa inkululeko. Kwimo yayo emsulwa, idemokhrasi ithi wonke umntu ubalulekile, kubo bonke ubumdaka kunye nokudideka kunye neyantlukwano. Onke amalungu oluntu lwethu anemicimbi kwaye xa olu lungiso lungapheliyo luhambelana kunye, banokwenza umculo omnandi. Star Trek: Ukufumanisa I-CBS yoFikelelo lonke
izixhobo zokulandela umkhondo ze-microchip zabantu
Ukukhanyisa ikamva elidlulileyo
Kodwa njengokuba Ukufumanisa Ukuboniswa komothuko kusikhumbuza, iyantlukwano inokuchuma kuphela xa abo babezokuyitshabalalisa babekwa uxanduva ngezenzo zabo.
Ngalo lonke ixesha lesithathu, abalinganiswa benza izigqibo ezinzima ukukhusela amaxabiso abo. Oko kubandakanya i-Starfleet Admiral Vance (i-Oded Fehr), igosa aligcinanga i-Federation ikunye. Owona mceli mngeni weVance uza kwisiqendu sesiphelo sonyaka, apho inkokeli ye-Emerald Chain u-Osyrra (uJanet Kidder) acebisa isivumelwano esiza kudibanisa i-Chain kunye ne-Federation.
UVance ubona ixabiso lesithembiso sika-Osyrra, esiza kuzisa uxolo kwaye sibuyisele i-Federation kubuqaqawuli bayo bangaphambili. Kodwa uyala ukubingelela amaxabiso kwi-Federation yamandla okomzuzwana, efuna ukuba uKhuphiswano luyekelele ebukhobokeni kwaye luyeke impembelelo kwiiplanethi ezisengozini. Okubaluleke ngakumbi, ufuna uxanduva. Phambi komanyano, u-Osyrra kufuneka ehle esikhundleni sakhe sobunkokeli kwaye azame ityala lakhe.
Ujonge ixesha elidlulileyo, uqhankqalazo lwase-Osyrra; Ndikumzobela imephu yexa elizayo.
Ixesha elidlulileyo kukuphela kokhanyiso esinokubona ngalo ikamva.
Utshintshiselwano lunembalelwano engaphezulwana kwempikiswano eyenzekayo eWashington ngoku, njengoko abenzi bomthetho bejonga ukugweba uTrump kunye nokugxotha amalungu akhuthaza imvukelo. Ngelixa abanye bema ngelithi kufuneka siqhubele phambili kwaye siyeke elidlulileyo libe lixesha elidlulileyo, impikiswano yeVance ibeka umsebenzi weCongress. Ukuze amaxabiso ethu abe nentsingiselo, kufuneka aboniswe esebenza, ngamanye amaxesha kubandakanya ukohlwaya abo baphula ezo njongo.
Sinethemba lokuba abaphathi abatsha bangasebenza ukulungisa umonakalo owenziwe kumaziko ethu. Kodwa idemokhrasi ayinakuze ihlale kwiqela okanye umntu omnye. Ifuna ukuba sonke silungise iingxaki ezixhokonxwe ngumongameli wangaphambili, iingxaki ezindala njengeMelika uqobo.
Lo msebenzi ubandakanya okuninzi ngakumbi kunokubukela umboniso we-sci-fi TV. Kodwa xa siphulukana nethemba, xa siziva sidiniwe, xa sizibuza ukuba silwela ntoni, singasoloko siphethukela kwimiboniso efana nayo Star Trek: Ukufumanisa . Ngenxa yomzabalazo wabasebenzi kunye neemfazwe zethu eziqhubekayo, ukubetha kwabasebenzi abancumileyo baziva ngathi akukho nto iphazamisayo kwaye kufana nesenzo sokudelela, isikhumbuzo sokuba umsebenzi wethu awuzange wenziwe wedwa kwaye kuhlala kukho intuthuzelo eluntwini, nangaphandle kumda wokugqibela.
Star Trek: Ukufumanisa iyafumaneka ukusasaza kwi-CBS All Access.
UGeorge Lucas: 'Star Wars' Ngaba 'yiFilimu yabaneminyaka eli-12 ubudala'
Izibonelelo zokusiNgqongileyo zokutya okuGqwesileyo kunye nokuSekhaya
Uyayithanda Xa Umthobile
wenzeni ngentsimbi yeshumi elinanye ebusuku
eyona nkampani ilungisa amatyala
iqhuba njani inqanawa yefaskoti eluhlaza
ubumnyama isiqendu 1 siphindaphinde
liam hemsworth ayisiyothando na
amaqanda aluhlaza kunye no-ham kuvaliwe